Waa maxay sababta ayan macquul aheyn in shuban iyo akhriyaan buugaag Lugood Audio on Android?
Lahaanshaha buugaagta codka ah waa mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu xiisaha badan oo xiiso leh in aad maalmahan ku yeelan karaan. In ay awoodaan in ay dhagaystaan ​​content buugga kor loogu akhriyo xirfadle ka saaraan ka kaaftoomi doono isagoo buug kolaygaaga ku wakhtiga oo dhan, oo waxaad ka heli kartaa kumanyaal ah ee aad PC ama laptop, taas oo aad u fiican. Si kastaba ha ahaatee, akhristayaasha badan oo buugga isticmaalayso Lugood in ay iibsadaan iyo kaydka buugaagta, iyo marka ay timaado samaynta wareeg ah dhinaca barnaamijyada Android, ka dibna qaar ka mid ah arrimaha u muuqdaan in ay u muuqdaan, iyo in wax aad doonaysid in aad maqsuud waa hubaal.
Arinka u muhiimsan in halkan yimaado waa mid aad u fudud in la fahmo. Si fudud u saaray, content Lugood, waxa ay noqon buugaagta kulan iyo wixii la mid ah ayaa DRM gaar ah in aan macquul aheyn inay gacanta ka saar. Apple isticmaalaa DRM si ay u hubiyo in content halkan weli unpirated iyo Sucuudiga. Sababta oo ah in, ma aha oo kaliya waxa ay adag tahay in aad taas samayn, waxa kale oo sharci darro oo aad si xaqiiqo ah u socdaan in ay waqti adag isagoo sidaas samaynaya.
Dabcan, hadii aanad u baahan tahay inaad taas samayn, waxaad isku dayi kartaa a codsiyada yar in aad ku soo dejin doonaa awoodaha saarista DRM, laakiin waxaa wax yar adag tahay in la ogaado waxayna u isticmaalaan si sax ah u noqon kara.
Ma jiraan wax Chine in ii caawin karaa?
Nasiib darro, ma jiraan wax app abuuray si gaar ah in ay ka saarto ilaalinta ka buugaag Lugood, iyo sababta oo ah in ay noqon karaan wax yar adag tahay in la helo mid ka mid ah oo kaa caawin kara. Laakiin, waxaa jira qalab yar oo laga yaabo inay ku caawiyaan loo eegin.
iSyncr Android waa xal weyn oo kaa caawin doona inaad wareejiyo content aad u baahan tahay si ay Android ah, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa si loo soo dajiyo macmiilka desktop oo si deg deg ah ku xidhi doonaa adiga rakibo Lugood ah. Marka lagu sameeyo, waxaad awoodi doontaa inaad si loo soo dajiyo macmiilka Android ka dibna nuqul ka content aad rabto, asal ahaan dhan buugaag la natiijooyin lama ilaawaan ah.
Halkan Ka hel: http://www.jrtstudio.com/iSyncr-iTunes-for-Android
iTunesForAndroid kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan wax la mid ah, oo aad u baahan tahay in ay asal raac tallaabooyinka la mid ah, in habka ah in arrin sahlan in la fahmo mar walba! App waa lacag la'aan iyo waxay u baahan tahay rakibo macmiilka ah Android si fiican u shaqeeyaan!
Halkan Ka hel: http://www.itunes2android.com
Easy Phone Gurtida
Easy Phone Gurtida ka dhigaysa in xitaa fudud si ay u gudbiyaan buugaag tan waxa ay leedahay qalab aad u fiican oo lagu kalsoonaan karo in aad isticmaali karto mar walba, iyadoo natiijada aan caadi ahayn oo sax ah interface. Waxaa jira version ah oo lacag la'aan ah oo la bixiyey, laakiin labada arrin si fiican u shaqeeyo oo ku siin waayo-aragnimo adag!
Halkan Ka hel: http://easyphonetunes.com/download/download.html
doubleTwist weli xal kale oo lagu hawshan! Maxaa ka dhigay marooji Double taagan yahay sida ay fududahay in la isticmaalo oo lagu kalsoonaan karo geedi socodku waa, iyo natiijada Ha joojin inaad ka muuqan. Waxaad jeclaan doonaa jidka app u shaqeeyo iyo natiijada ay aad u wanaagsan yihiin!
Sida aad arki karto, waa wax fudud oo xiiso leh taas samayn, iyo natiijada ka sii badan yihiin cajiib ah. Dabcan, tani ma aha waxa ugu fiican in la sameeyo, iyo mararka qaar, waxayna ku xiran tahay audio ah, waxa laga yaabaa inay qaataan wakhti dheer qaar ka mid ah si aad u samaysay shaqada, laakiin ugu dambeyntii baahnid inaad ku kalsoon tahay qalabka sida waxay aad ugu fiican ku siin doonaa natiijooyinka suurtogalka ah waxaad ka heli kartaa, sida ugu dhakhsaha badan lagu bixin karo, dabcan.
Halkan Ka hel: https://www.doubletwist.com
Sida loo badalo Lugood buug audio sida file MP3
Si ay u qabtaan habkan aad ka fiirin kartaa AAC in MP3 Audiobook Converter oo sameeya shaqo weyn ee loo dhoofiyo kitaabka audio ka Lugood iyo idinka siinaya, natiijooyin la taaban karo in aad doonaysid in aad loo qadariyo.
Fikradda ugu weyn ee la app tani waa in ay isku dayi doonaan in ay unprotect audiobook iyo music ka tiro balaadhan oo ah dukaamada, oo ay ku jiraan Lugood.
Waxaad u baahan doontaa si loo soo dajiyo app ugu horeysay, ka dibna dajiyaan buugaag ka Lugood. Marka lagu sameeyo, waxaad u baahan doontaa in ay doortaan buugaag ah. Tallaabada xigta ee aad u baahan tahay in ay doortaan file wax soo saarka sida MP3, ka dibna bilowdo hawlaha qaab beddelidda. Sug ilaa walba la dhammeeyo iyo in ay tahay.
Tani waa waxa aad u leedahay in la sameeyo si loo soo wareejiyo buugaag Lugood in Android hab xirfadaysan. Xusuusnow in halka ma jirto habka rasmiga ah si ay u qabtaan Android, Chine, kuwaas oo kaa caawin kara inaad shaqo, oo waa in aad u isticmaasho inta badan waxaa suurtagal ah haddii aad u baahan tahay audiobook diinta degdeg ah si ay u habboon Android.
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Lugood Books Audio in Android Devices